Tangerine Peel chinhu chakakosha chekudya uye mishonga yemishonga.Chikafu chine hutano mune dzimwe nyika.Inonaka zvishoma inovava uye inotapira, mumwe munhu anoida nepo vamwe vanhu vachiivenga.Edza uone kuti uri rudzi rwupi.
Musika wepasi rose wemusika wekupisa usingapise waifungidzirwa paUSD 7.31 bhiriyoni muna 2019 uye unotarisirwa kusvika pamadhora mazana mapfumbamwe nemakumi matatu nematanhatu muna 2020. kushandiswa kuri kufambisa kukura kwemusika uyu.
Yakasarudzika Tangerine Peel, kutamba nerurimi rwako.
Mandarin asinganzwisisike anotapira ane kakuvava.realistic experience pasina chero muface wako artificial flavour.
Tangerine Peel flavour yakatsikirirwa mukuputika bhinzi ine yekucheka edge tech.Kuti uwane kuchengetedza kwenguva yakareba uye kuwedzera kwakasimba.Mushure mekurumwa, unogona kunakidzwa nekunaka kwakasiyana chero nguva chero kupi zviri nyore.
APAC yaive musika mukuru wekupisa-usingapise fodya mumusika muna 2019, uye dunhu rinozopa mikana yakawanda yekukura kumusika vatengesi panguva yekufanotaura.Huwandu huri kuwedzera hwekutangwa kwechigadzirwa huchapesvedzera zvakanyanya kupisa-kusingapise musika wefodya kukura mudunhu rino.
Kupfuura 39% yekukura kwemusika kuchabva kuAPAC panguva yekufanotaura.Japan ndiyo musika wakakosha wekupisa-kwete-kupisa zvigadzirwa zvefodya muAPAC.Kukura kwemusika mudunhu rino kuchakurumidza kupfuura kukura kwemusika muNorth America, MEA, uye South America.
Zvakapfuura: HEECHI Regular Nicotine HNB Herbal Stick
Zvinotevera: ALD HNB Heating Chishandiso
Zita reChigadzirwa: HEECHI TANGERINE PEEL Nicotine HNB Herbal Stick
Kunhuhwirira: Tangerine Peel